Global Voices teny Malagasy » Ireo Syriana mialokaloka ao Libanona miatrika tafiotran-dranomandry mahery vaika sy fepetra tsy manaja ny mahaolona any an-toby · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Febroary 2019 8:29 GMT 1	 · Mpanoratra Hassan Chamoun Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Voina, Zon'olombelona
Miatrika tondradrano sy hatsiaka mamanala anatin'ny andian-tadio antsoina hoe “Norma” izay nandona tamin'ny 6 janoary 2019 ny Syriana mialokaloka ao Libanona. Nitondra orana nikija nandritra ny dimy andro izany tany amoron-dranomasin'i Libanona ary ranomandry tany an-tendrombohitra Libanona sy tany amin'ny lemak'i Bekaa. Niteraka fahasimbana goavana tao Libanona ny tadio, nahatondraka ireo lalambe  ary nanakatona sekoly nandritra ny roa andro tany amin'ny faritra sasany tao amin'ny firenena.
Tsy maintsy miaritra ny tadio tao anaty toby tsizarizary ny Syriana mpialokaloka, noho ny tsy famelan'ny  manampahefana Libaney ny fananganana rafitrano maharitra. Araka ny tatitra nataon'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpialokaloka (UNHCR)  nivoaka tamin'ny 9 Janoary, “mpifindramonina miisa 70.000 monina amin'ny fanorenana vonjimaika miisa 850 no mety ho tratran'ny tondradrano, orampanala matevina na hatsiaka faratampony”.
Lahatsoratra  iray hafa an'ny UNHCR no nanondro fa mpifindramonina mihoatra ny 11.300 no tratra: tondraky ny rano tanteraka ny toby any Dalhamiya any amin'ny Lemak'i Bekaa.
Araka ny Associated Press , dibo-drano nandritra ny tafiotra ny fitobian'ny mpialokaloka tao Bar Elias tao amin'ny lemak'i Bekaa, manakaiky an'i Litani, renirano lava indrindra ao Libanona. Ao no fitobian'ny mpialokaloka miisa 420, ka ankizy ny 100 amin'izany.
Ankoatra izany, nilaza ny Vokovoko Mena Libaney  fa olona 200 no noterena hafindra toerana avy ao amin'ny tobin-dry zareo ao avaratr'i Libanona mifanolo-tsisintany amin'i Syria rehefa nihoatra ny morony ny renirano ao an-toerana.
Mitsikera ny tsi-firaharahian'ny manampahefana ao Bekaa ny Syriana mpifindramonina sasantsasany. Nilaza tamin'i Al Jazeera  ohatra i Hussam Mansour fa efa imbetsaka izy no niantso ny fiadidiana ny tanànan'i Ghazze ao Bekaa mba hampakarana ny haavon'ny toerana ametrahana ny tranolay, fa tsy nisy niraharaha.
Nanambara ny UNCHR  fa efa nofenoina hitsinjovana ny fisian'ny toetrandro ratsy ny tahiry hanaovana vonjy taitra sy fanadiovana.
Na dia eo aza ny fahasahiranana zakain'ny Syriana mpialokaloka manerana ny firenena, Nilaza ny filoha Libaney Joseph Aoun  fa “mavesatra eo amin'ny toekarena, fiarahamonina ary filaminan'i Libanona ny krizin'ny mpialokaloka” ary tokony hiverina any Syria ny mpialokaloka mba ahafahany miaina “ao anatin'ny fahamendrehana”.
Mifanaraka indrindra amin'ny fomba fiteny mankahala mpialokaloka  ataon'ny antokony, Ny Hetsika Mandatehezana Tia Tanindrazana (FPM) nandritra ny taona maro izany, ary indrindra ny fanaon'ny vinantolahiny sady minisitry ny raharaham-bahiny, Gebran Bassil, izay mpitarika ny FPM ihany koa.
Teren'i Aoun, mpiara-dia amin'ny vondrona milisy Hezbollah pro-Assad, ny firaisamonina iraisampirenena hamerina hody ny Syriana mpialokaloka  any amin'ny lazaina ho ‘faritra tsara aro’ ao Syria. Melohin'ny minisitra sasany ao amin'ny governemanta Libaney izany tosika izany ka nolazainy fa  mpialokaloka am-polony nody an-tanindrazana no maty nisy namono.
Wessal al Mustafa, mpialokaloka iray ao Libanona no niteny tamin'ny Aljazeera  fa “tsy misy na inona na inona tokony iverenana any”.
Mpialokaloka iray hafa, Sleiman Ahmad, 25 taona, no nilaza tamin'ny Independent fa:  “Raha miverina any aho dia na misoratra anarana ho miaramila na samborina, [..] Manan-janaka vavikely aho. Inona no hitranga aminy?”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/08/133808/
 nahatondraka ireo lalambe: https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-09/473574-storm-inundates-highways-refugee-camps.ashx?utm_source=Magnet%26utm_medium=Related%20Articles%20widget%26utm_campaign=Magnet%20tools
 tsy famelan'ny: https://www.aljazeera.com/news/2019/01/lebanon-syrian-refugees-brace-floods-storm-nears-190113053554914.html
 Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpialokaloka (UNHCR): https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67551
 nilaza ny Vokovoko Mena Libaney: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/lebanon-storm-weather-winter-syria-refugee-girl-death-norma-a8719776.html
 Nanambara ny UNCHR: https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-14/473975-warnings-issued-as-lebanon-prepares-to-face-storm-miriam.ashx
 fomba fiteny mankahala mpialokaloka: https://globalvoices.org/2018/02/01/lebanons-scapegoating-of-refugees-did-not-start-with-syrians-but-with-palestinians/
 Nahoana no matahotra hiverina any Syria fehezin'i Assad ny Syriana mpialokaloka: https://globalvoices.org/2018/07/25/why-syrian-refugees-in-lebanon-fear-going-back-to-an-assad-controlled-syria/
 hody ny Syriana mpialokaloka: https://globalvoices.org/2018/08/28/syrian-refugees-in-lebanon-continue-to-play-the-resettlement-waiting-game/
 ka nolazainy fa: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Nov-03/468301-about-20-refugees-who-returned-have-been-killed-merehbi.ashx